Daawo Sawirada: Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay Agagaarka Garoonka Aadan Cadde « AYAAMO TV
594 Views Date February 13th, 2014 time 3:18 pm
Goob joogayaal ayaa ku waramay in gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu watay Ruux Naftii hore ah oo bartilmaameedkiisu ahaa gaadiid ay wateen Saraakiil UN-ka katirsan oo kasoo baxay xarun ee Un-ka ku leedahay meel ku dhaw Garoonka Aadan Cadde.
Gaadiidka UN-ka ee qaraxa lagu weeraray waxaa saarnaa sida aan wararka ku helnay haweeneyda Madaxda ka ah Hay’adda UNHCR Somalia oo lagu Magacaabo Alesandara ,
Haweenaydaa ayaa la sheegayaa in Baabuurka la saarnaayeen 3 qof Shaqaale oo ka tirsan UN-ka Soomaaliya, kuwaa oo kala ah darawalka Baabuurka oo Soomaali ah iyo labo qof oo ajnabi ah oo iyagana ka tirsan shaqaalaha UN-ka Somalia.
Baabuurka shaqaalaha UN-ku saarnaayeen ayaa la sheegayaa in uu ahaa mid aan xabaduhu iyo qaraxyadu karin, waxaaxa lasoo tabinayaa in dhamaan ay wada bed qabaan shaqaalihii saarnaa , marka laga reebo dhawaacyo soo gaaray Ciidamo ilaalou ahaa Gaadiidka UN-ka.
Qaraxa waxaa ku dhintay dad ku dhaw ilaa 5-qof ay ku jirto Haweeney oo kusugneed goob Maqaayad waxaana la tilmaamay in gabi ahaan Haweeneydaasi ay gubatay sida uu noo xaqiijiyay Wariye tagay halka uu qaraxu ka dhacay.
Gaadiidka Ampalaasta ayaana goobta qaraxu ka dhacay ka daad gureeyay tiro dhaawacyo ah oon wali la xaqiijin tiradooda kuwaa oo loola cararay goobaha caafimaadka ee Magaalada Muqdisho.
Dowlada Soomaaliya ayaan wali Faah faahin ka bixin Ujeedka Weerarka Ismiidaaminta ah iyo qasaaraha ka dhashay , waxaana laga war dhoorayaa in saacadaha soo aadan Masuuliyiin katirsan Dowlada ka warbixiyaan Weerarka Ismiidaaminta ah ee ka dhacay goob ku dhaw Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Weerarkan Ismiidaaminta ah ee Maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xili maalin kahor labo Qarax uu midkood ahaa Ismiidaamin uu ka dhacay qeybo kamid ah Caasimada Muqdisho.